तिहारमा टेलिकमको अफरै अफर, रिचार्ज गर्दा २० प्रतिशतसम्म बोनस | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more तिहारमा टेलिकमको अफरै अफर, रिचार्ज गर्दा २० प्रतिशतसम्म बोनस
तिहारमा टेलिकमको अफरै अफर, रिचार्ज गर्दा २० प्रतिशतसम्म बोनस
कात्तिक ८ गते, २०७६ - १६:१६
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले नेपालीहरुको महान चाड तिहारका साथै छठ र नेपाल संवतको अवसरमा ग्राहकहरुको निमित्त विशेष अफर सार्वजनिक गरेको छ । टेलिकमले चाडपर्व अफर सार्वजनिक गर्दै रिचार्जमा बोनसदेखि फोरजी प्रयोगकर्तालाई विशेष छुट दिने जनाएको छ ।
रिचार्जमा २० प्रतिशतसम्म बोनस
टेलिकमले आफ्ना जीएसएम/सीडीएमएका प्रिपेड र पोष्टपेड मोबाइलमा रिचार्ज गर्दा बोनस उपलब्ध गराउने छ । आगामी कात्तिक १० देखि १६ गतेसम्म रिचार्ज कार्ड वा एमपोस ९ःएयक्० बाट रिचार्ज गर्दा बोनस प्रदान गरिने जनाएको छ ।
वोनस योजनामा रु. ५०।–, १००।– र २००।– को रिचार्ज कार्डबाट रिचार्ज गर्दा १० प्रतिशत र रु. ५००।– र १०००।– को रिचार्ज कार्डबाट रिचार्ज गर्दा २० प्रतिशत बोनस प्राप्त हुनेछ । रु. ५०।–, १००।– र २००।– को बोनस ३ दिन भित्र र रु. ५००।– र १०००।– को बोनस ५ दिन भित्र उपयोग गरिसक्नु पर्नेछ ।
फोरजी बनाउँदा २ सय एमबी डाटा
टेलिकमले टुजी र थ्रीजीका प्रयोगकर्ताका लागि पनि विशेष अफर ल्याएको छ । टुजी र थ्रीजी नेटवर्कमा सिम चलाईरहेका ग्राहकहरुले फोरजी नेटवर्कमा आवद्ध हुँदा २ सय एमबी डाटा निशुल्क पाउने छन् । जसको लागि कुनै शुल्क नलाग्ने बताइएको छ । ग्राहकले *444# डायल गरी फोरजी नेटवर्कमा सित्तैमा आवद्ध हुन सक्नेछन् ।
मिस्ड कल अलर्ट निशुल्क एक्टिभ
टेलिकमले आफ्ना पोष्टपेड र प्रिपेड ग्राहकका लागि मिस्ड कल अलर्ट (एमसीए) सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने भएको छ । यो सेवा अर्को सूचना जारी नभए सम्म निरन्तर रहने जनाइएको छ । आफ्नो मोबाइलमार्फत *1400# डायल गरेर दिइएका विकल्प अनुसार अथवा unsub mca लेखेर 1400 मा एसएमएस पठाई यो सुविधा हटाउन सकिने छ । साथै कम्पनीको एप ‘नेपाल टेलिकम’ बाट पनि यो सेवा प्रयोगमा ल्याउन वा हटाउन सकिन्छ ।
त्यस्तै टेलिकमले कम्पनीको इन्टरनेट/इन्ट्रानेट लिज लाइन सेवा लिने नयाँ ग्राहकहरुलाई दर्ता शुल्क रु. ३२०।– आगामी छठसम्म निःशुल्क गरिएको जानकारी दिएको छ ।
टेलिकमको अन्य सेवा तथा प्याकेजहरु लिनको लागि ग्राहकले *1415# मा डायल गर्नु पर्नेछ । कम्पनीको एप ‘नेपाल टेलिकम’ बाट पनि यस सम्बन्धी जानकारी लिन तथा सेवा खरिद गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी कम्पनीको वेबसाइट www.ntc.net.np मार्फत यस सम्बन्धी विस्तृत जानकारी लिन सकिन्छ ।
कात्तिक ८ गते, २०७६ - १६:१६ मा प्रकाशित